NATIIJADA DOORASHADA YURUB: Xisbiga Miljöpartiet oo si weyn ugu guuleystay doorashada | Somaliska
Natiijada doorashada Yurub ayaa soo baxday iyadoo taageerada xisbiga Miljöpartiet ay aad kor ugu kacday. Iyagoo noqday xisbiga 2-aad ee ugu kuraasta badan. Waxaa sidoo kale kuraas ka helay baarlaamanka Yurub xisbiga Dumarka ee FI iyo sidoo kale cunsuriyiinta SD. Xisbiga maamula dowlada Sweden ee Moderaterna (M) ayaa si weyn ugu qasaaray doorashada. Iyadoo Socialka ay xoogaa hoos u dhacday taageeradooda.
Xisbiga Miljöpartiet (MP) ayaa helay 15.2% marka loo barbar dhigo doorashadii 2009 oo ay heleen 11%. Xisbiga dumarka ee Feminist Initiative (FI) ayaa helay 5,3% iyagoo markii ugu horeysay kuraas ka helay baarlamaanka Yurub. Cunsuriyiinta Sverigedemokraterna (SD) ayaa helay 9,9% iyagoo sidoo kale markii ugu horeysay kuraas ka helay baarlamaanka. Xisbiga Moderaterna (M) aya helay 13,5% iyagoo hoos u dhacay -5,4%. Socialdemokraterna (S) ayaa helay 24,6%.
Arinta ugu xiisaha badan ee ka soo baxaysa doorashada ayaa ah cododka ay heleen xisbiyada MP, FI, SD iyo M. Wadanka Sweden ayaa baarlamaanka Yurub ka helaya 20 kursi.
Dhinaca kale ee qaarada Yurub ayaa waxaa aad kor ugu kacay taageerada ay helayaan xisbiyada cunsuriyiinta ah. Mowduuc gaar ah ayaan ku eegi doonaa sida u guuleysteen cunsuriyiinta Yurub.
Masjidka Alhouda ee magaallada Flen oo dhaawacyo loo gaysto
gävle boy says:
May 26, 2014 at 09:03
xisbiga dumarka waxaaa loogu ololaynaayay siyaasad lagu soo jiidanaayay soogalootiga tusaale ahaan, Somaliland oo loo sheegay in la taageri doono, qadiyadooda, iyo ajaaniibta kale oo iyagana loosheegay waxlamida
May 26, 2014 at 09:56
Gävle Boy. Hadii FI ay tageerayan in Somalia lakala jaro waxay iila micno yihiin SD. Somali baan ahay mana ogali wax dhib u keenaya dadkayaga iyo Dalkeena. Waa kala fikrad duwanan karna lakin dalkena lakala jaro marabo.
Hadii uu jiro xisbi kala qaybinaya ama kala saaraya dadka waa SD, xisbiyada kale waxay raadinayan sidii dadku isku dhex gali lahaa. Marka hadii aad rabtid kala saarista dadka iyo kala fogaynta umada u codee SD. Hadii kale xisbiyada kale midkood. waa iga talo.
Adoogeey nin islaamoow kuwaan cunsuriyiinta haday wadanka qabsadaan waa salaan iyo ku kala tag ku ducaysta shartooda inuu ilaah naga qabto
xisbiga dumarku wuxuu codad badan ka helay somalilanderka dagan sverige, sababto ah siyaasadiisa ayay ku jirtay inuu tagerayo madaxbanaanida somaliland,
waxa jiro somaliyey kuma siin karan xisbiyo swedan ah ama aduun ka waxa ku aqoon san karo waa somali kale lakinsa qabiil qaran ma noqda meysha waxa dago qabiila badan .mana dhaci donta in la aqoon sado . insha alaah xerka UN ka rac waayo daad ka waa is ku diin waa is ku af waa is ku dhaqan maxa kala jaraa ma ii sheygi kartan .100 sano 300 sano sheykadan waa soco
somaliya ha nolato .ama magalooyin ka swedan lala tagin calan ka qabiil ka ah waxa dhac day dagmooyin swedan ah in habra cadan ah dhaheyn . waa in aqoon sanaya daad waxa loogu shey keyaay .ama caruur somaliyed la dhahay school ka la imada wadan kiina calan kiisa waxa ey la imaadeyn calan ka qabiil kooda waxa ey ku jogan wadan kan waa somali mahan somaliland. afti aa laga qada boramo iyo lascanood buhoodle lasqori ssc dhulka daad ka dagan ma ogolo in daad ka la kala jaro ama qabiil loo daneyo